kacsiga sidee loo kordhiyaa hadduu yaryahay nin iyo naagba? | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada kacsiga sidee loo kordhiyaa hadduu yaryahay nin iyo naagba?
kacsiga sidee loo kordhiyaa hadduu yaryahay nin iyo naagba?
Thursday, July 27, 2017 Bulshada Edit
Bulsha:- Waayaahan dhalinyarada waxay ka cabaadaan kacsi yari ama kacsi la’aan waxaan kula talinaynaa inay raacaan nidaamka raashinka soo socda
marka hore soo qaado koob Malab ah iyo koob barkii Basal la ridqay ah, oo isku kari ilaa iyo inta urta basashu ka ba’ayso, markaa hal macalgo ka qaado raashin kasta dabadii, adigaa wax dareemi doone eh. – Macalgo Xabbat sowdo shiidan ah intaad ku jebiso toddoba xabbo oo ‘Ukun guri’ ah, maalin dhaaf u qaado muddo bil ah, waxaad kala kulantana ha iga qarsan.
– Iniinyaha Karafiska (Gelery), Jarjiirka (Rocket), Fijilka (Radish), Karootada (Carrot), Sanjabiilka iyo Xabbat sowdada, intaad mid waliba (25g) kasoo qaadatid, si wanaagsan u shiid kuna cajiin hal kiilogaraam oo Malab saafi ah, dabeetana macalgo yar raashinka dabadii ka qaado, adigoo weliba badsanaya cabista Canabka iyo Karootada la miiray iyo cunista Ukunta guryaha. Kolkaad
intaa dhammaysana Eebbe idankii amankaag baad arki.
– Soo qaado Ukunta guryaha
oo intaad meel yar ka daloolisid ka daadi xabka cad, daloolkana uga dar Malab. Intaa kedib cajiin bur uga dabool daloolkii yaraa oo foornada xoogaa ku shiil ama weel biyo ku jiraan intaad dhex dhigtid dabka la saar. Dabeeto intaad ukunta soo saartid, waxa ku jira ka cab iyagoo kulul, bil walbana hal usbuuc sidaa yeel, daawo kuuma dhinnee.
RIIX HALKAAN DAAWO LIVE ACTION VIDEO (Hadaawan hadaa dareen dhawdahay ).
FIIRO GAAR AH – Intaad cabi lahayd biyo caadi ah, waxaa lagugula talinayaa cabista biyaha Macdanta ah (Mineral water), hana ahaato cuntada kadib, maxaa yeelay cuntada oo biyaha lagu dhex cabaa dheefshiidka ayay carqaladeysaa.
– Dumarka aan kuu bannaanayn indhahaaga ka daboolo, Dikriga Alle iyo Cibaadadana badso (Salaadda, Soonka iyo Qur’aan akhriska)
– waxaa lagaa rabaa inaad almiinto samayso oo aamlin kasta xoogaa aad socoto ama aad dhqdhaqaaqdo